Ukugibela | January 2022
Main > Ukugibela
ukugibela ibhayisikili ngaphandle kwezandla
Ukuhamba ngebhayisikili ungenazandla - izimpendulo ezilula zemibuzo
Ungakwazi ukugibela ibhayisikili ungenazandla? Ukuzijayeza ukugibela ngaphandle kwezandla endaweni ephephile, ephansi yezimoto kuzokusiza ukuthuthukisa ibhalansi nokulawula kwakho, kukwenza ukwazi ukwengeza noma ukususa izingqimba ngaphandle kokwehla ebhayisikilini, uphethiloli ngebhayisikili ngokuzethemba okukhulu, hlanza izibuko zakho, ungene ngokushesha , futhi kuzokusiza nokuthi ulungele ukushaya indesheni uma unqoba
ukugibela ibhayisikili uya esikoleni
Ukugibela ibhayisikili uye esikoleni - izixazululo ezisebenzayo
Iminyaka emingaki okufanele ingane ikwazi ukugibela ibhayisikili? Fundisa ingane yakho ukugibela ibhayisikili, isifinyezo: Iminyaka engcono kakhulu yokufundisa ingane yakho iphakathi kweminyaka emine nengu-6 ubudala. Kufanele kuthathe imizuzu engama-45. Qala ngokubenza babhalansise okungukuthi ungagxili ekuvezeni izinsimbi okwamanje. Khetha endaweni ethile evulekile futhi eyisicaba ukuqala ngayo, okungcono hhayi utshani ngoba kungenza kube nzima ukwakha
ukugibela ngomgwaqo owubhuqu
Ukuhamba ngomgwaqo owubhuqu - ireferensi ephelele
Uwuthambisa kanjani umgwaqo owubhuqu? Enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokugcwalisa amarowu ukuhudula okuthile okusindayo ngaphezulu komgwaqo ngemuva kwemoto. Ukudonsa okuhle kungenziwa ngogodo, uthayi wesitimela, noma isiqeshana sensimbi i-I-beam. Ukuhudula kufanele kube inqobo nje uma imoto yakho ibanzi. Shaya imbobo ekugcineni ngakunye kokuhudula cishe unyawo ukusuka ekugcineni.
ukugibela ibhayisikili ukuze ungene esimweni
Ukugibela ibhayisikili ukuze ube sesimweni - uphendule imibuzo
Kuthatha isikhathi esingakanani ukungena esimweni sebhayisikili? Ngemuva kwekhefu elide, ngithola ukuthi kuthatha phakathi kwezinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyishumi ukuqala ukuzizwa ngivamile ebhayisikili futhi. Izinsuku ezimbalwa zokuqala kuzoba ngumshikashika kodwa ngemuva kwesonto noma ngaphezulu kufanele uzizwe ulungile ukuqala ukukhulisa umthwalo wokuqeqeshwa, bese usendleleni yokululama.
encane ukugibela ibhalansi ibhayisikili
Ibhayisikili eligibela ibhalansi - incwajana ebanzi
Ngabe unyaka weminyaka emibili ungagibela ibhayisikili elilinganisiwe? Lapho nje izingane zihamba futhi zinamakhono ahloniphekile emoto (ngokuvamile cishe izinyanga eziyi-18), zingaqala ngebhayisikili elilinganiselayo. Ngempela, iningi lezingane ezifunda ukugibela ibhayisikili elibhalansile njengojahidada zizokwazi ukweqa amasondo okuqeqesha ngokuphelele uma sezishintshele ebhayisikili elihamba ngezinyawo.
ukubeka kuphi ukukhiya ibhayisikili ngenkathi ugibele
Ukubeka kuphi ukukhiya ibhayisikili ngenkathi ugibele - ukuthi ungaxazulula kanjani
Ubeka kuphi ukukhiya kwakho ibhayisikili lapho ugibela iReddit? Yebo, indawo enhle yokukhiya ikuhlaka noma ku-pannier. Uma kuwukhiye osindayo ngokwanele ukuze usebenze, awufuni ukuthi uwuthwale kumuntu wakho. Ngithanda intaba kryptonite.
upholi ugibele ibhayisikili
Upholi ugibele ibhayisikili - izimpendulo ezilula zemibuzo